I-UX Design ne-SEO: Zingasebenza kanjani lezi zinto ezimbili zeWebhusayithi ndawonye ku-Advantage yakho | Martech Zone
Ngokuhamba kwesikhathi, okulindelwe kumawebhusayithi sekuguqukile. Lokhu okulindelwe kusetha izindinganiso zokwenza ubuhlakani bomsebenzisi isayithi elinikezayo.
Ngesifiso sezinjini zokusesha ukuhlinzeka ngemiphumela efanele futhi eyanelisa kakhulu ekuseshweni, ezinye izinto ezisezingeni ziyacatshangelwa. Enye yezinto ezibaluleke kakhulu kulezi zinsuku wukuhlangenwe nakho komsebenzisi (nezinto ezahlukahlukene zesayithi ezinomthelela kukho.). Ngakho-ke, kungacatshangwa ukuthi i-UX iyisici esibalulekile sokwenza kahle injini yokusesha.
Unalokhu engqondweni, kufanele uqiniseke ukuthi udizayina i-UX yakho ngamasu. Ngokwazi ukuhlinzeka nge-UX encomekayo, uqhubeka nokuqinisa i-SEO yesayithi lakho.
Lokhu okulandelayo izindlela zokuthi ungakhulisa kanjani ukuthi ukwakheka kwe-UX kungasetshenziswa kanjani ukwenza ngcono le ndawo yezinhlelo zakho ze-SEO:
Ukukhuluma Ngezakhiwo Zokwaziswa Esizeni Sakho
Okukodwa izici ezibalulekile zokwakhiwa kwe-UX imininingwane yakho ibekwa kanjani. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi isiza sakho kufanele sibe nokwakhiwa kolwazi okusebenziseka kalula ukuze kuqinisekiswe ukuthi abasebenzisi bakho bazokwazi ukufeza izinhloso zabo ngesiza sakho. Inhloso ukuqinisekisa ukuthi lapho uzokwazi ukunikeza ukwakheka kwesiza okujwayelekile okulula futhi okunembile, okuvumela abasebenzisi ukuthi bakhulise ukusetshenziswa kwesiza sakho ngenhloso yabo.
Ideskithophu ye-Apple ne-View View
Ukulungisa Ukuzulazula Iwebhusayithi
Enye into yokwakhiwa kwe-UX okufanele uyicabangele ukuzulazula kwesayithi lakho. Yize kungumbono olula ukuba nohlelo lokuzulazula olwenza abasebenzisi bakwazi ukuya ezindaweni ezihlukene zesayithi lakho, akuwona wonke amasayithi angakufeza lokho. Kufanele usebenze ngokuqhamuka nohlelo lokuzulazula olusebenzayo oluhlose ukuhlinzeka ngendlela elula yokuzungeza isiza sakho.
Kungcono ukuhlela uhlelo lokuzulazula lwesayithi lakho lube yisigaba sabaphathi.
Izinga lokuqala lesikhundla sakho sabaphathi bokuhamba kwakho okuyinhloko okuqukethe amakhasi ajwayelekile wesiza sakho. Ukuzulazula kwakho okuyinhloko kufanele kube nokuhlinzeka okuyinhloko kwebhizinisi lakho, kanye namanye amakhasi abalulekile isayithi lakho okufanele liqukathe ikhasi le-About Us.
Ukuzulazula kwakho kwezinga lesibili kungukuzulazula kwakho okusetshenziswayo nakho okungamakhasi abalulekile esayithi lakho, kepha mhlawumbe akubalulekanga njengalawo azobekwa ekuzulazuleni okuyinhloko. Lokhu kungafaka ikhasi lokuxhumana nathi, namanye amakhasi wesayithi lakho.
Ungasebenzisa futhi amazinga amaningi, noma i-mega navigation lapho imenyu yakho ingaholela kumamenyu amancane. Lokhu kusiza kakhulu ukuvumela abasebenzisi bakho ukuthi bambe ngokujule kusayithi lakho ngqo kusuka kumabha wakho wokuzulazula. Lokhu futhi kungukukhetha kokuzulazula kwamabhizinisi anemikhiqizo eminingi noma izinsizakalo ezingafakwa ezigabeni ezahlukahlukene. Kodwa-ke, inselelo yalokhu ukuqinisekisa ukuthi imigoqo yakho yemenyu izosebenza kahle njengoba kunamanye amasayithi imigoqo yawo yemenyu ewa ngisho nangaphambi kokufika ekhasini olifunayo.
Futhi, umqondo wukuqinisekisa ukuthi uzokwazi ukunikeza abasebenzisi bakho ikhono lokuzungeza isayithi lakho ngokushesha nangokushelelayo. Inselelo ukwakha a isikimu sokuzulazula esigxile kumsebenzisi lokho kuzokwazi ukukufeza lokho.
Sebenzela Ukuthuthukisa Ijubane Lakho Lewebhusayithi
Indawo elandelayo ethinta umuzwa womsebenzisi yijubane lewebhusayithi yakho. Kubalulekile ukuthi isiza sakho sikwazi ukulayisha ngokushesha, noma ungabeka engozini ukulahleka okukhulu.
Uma isiza sakho sehluleka ukulayisha ngaphakathi kwemizuzwana emi-3, amazinga akho okuncipha ngokuqinisekile azodlula ophahleni. Kepha hhayi kuphela ukuthi ikhasi lakho kufanele linikeze ngokushesha, kepha kufanele futhi ukwazi ukuvumela abasebenzisi bakho ukuthi baguqukele kwamanye amakhasi ngokushelela.
Ukuze ukwazi ukufeza lokhu, isiza sakho kufanele siqinisekise kuqala ukuthi isiza sakho sisebenza kungqalasizinda esebenza kahle kakhulu. Amaseva wakho noma insizakalo yokubamba oyisebenzisile kufanele ikwazi ukuxhasa isiza sakho kanye nenombolo yabasebenzisi abazoyivakashela, baqinisekise ukulayishwa okusheshayo kwabo bonke.
Esinye isinyathelo ukuqinisekisa ukuthi isiza sakho sikhanya, asinamafayela emidiya asindayo angadala ubunzima esizeni sakho. Kungumqondo omuhle ukuba namafayela emidiya ahlukahlukene, kepha lawa kufanele agcinwe ngosayizi omncane, futhi kuphela uma kunesidingo.
I-UX Design Kufanele Iguquke-Inobungane
Umklamo omfushane womfanekiso wesimanje wevektha wokukhula kokuguqulwa kwetrafikhi, ukwenziwa kweinjini yokusesha yewebhu, ukuhlaziywa kwewebhusayithi nokuthuthukiswa kokuqukethwe. Ihlukaniswe ngesizinda sombala wesitayela
Ukuqinisekisa ukuthi ukwakheka kwe-UX yesayithi lakho kuzoletha imbuyiselo, kufanele uyenze ngobuciko ngokuguqula engqondweni. Lokhu kufaka ukusebenzisa izindlela ezinamandla zokubizela esenzweni, kanye namanye amasu wokuguqula izinto.
Kepha futhi qiniseka ukuthi noma ngabe wenza umzamo omkhulu wokukhuthaza ukuguqulwa, awudluli ebhodini futhi uzwakala sengathi uthengisa kanzima kusayithi lakho lonke. Isiza sakho kufanele, sigxile kakhulu komsebenzisi, ngaphezu kwanoma yini. Konke kumayelana nokusebenzela isiza sakho ukuze ukwazi ukunikeza umuzwa omuhle womsebenzisi. Ngenkathi wenza lokho, ungahlanganisa amasu okusekela angaqhubekisela phambili ukuguqulwa.
Ukuthatha Inzuzo Yokuhamba Nokuphendula
Ekugcineni, kufanele futhi ugxile ekubalulekeni kokuhamba nokuphendula - izici ezimbili ezilethwa ukwanda kwama-smartphones nokwanda okulandelayo kosesho nokusetshenziswa kwesayithi kusuka kumadivayisi aphathwayo.
Isiza sakho kufanele futhi sikwazi ukuhlinzeka ngezinga elifanayo lesipiliyoni sekhwalithi kubasebenzisi beselula ngokuqhathaniswa nezindlela zendabuko zamawebhusayithi. Unalokho engqondweni, kungcono ukuklama isiza sakho ukuthi siphendule lapho sitholakala kumadivayisi eselula. Ngaphandle kokuba yinto yomuzwa womsebenzisi, ukuphendula kweselula kuyisici esiyinhloko sokukala ngokwaso, ikakhulukazi ukuthi izinjini zokusesha zibheke kakhulu kumawebhusayithi weselula manje.
Kungcono ukwamukela ukwakheka kwewebhu okuphendulayo, okuvumela isiza sakho ukuthi sizilungise nganoma iyiphi idivayisi ngaphandle kwesidingo sokuza nezinguqulo eziningi zesayithi lakho.
Thuthukisa i-UX ye-SEO Ethuthukisiwe
Ukuqala ngokuhlangenwe nakho komsebenzisi okukodwa kwe- izindlela ezinhle zokusebenzisa iwebhusayithi yakho ngo-2019 into ebaluleke ngokungangabazeki esezingeni, kulungile ukusebenzela ukuyithuthukisa. Kunezici eziningi ezihilelekile, futhi ezinye ezibaluleke kakhulu zibhalwe ngenhla. Okungenani sebenza kulezi zindawo ezinhlanu, futhi uzobe usendleleni efanele ekuqinisekiseni ukuthi isiza sakho sizoba namathuba angcono okuthola indawo engcono emiphumeleni yokucinga.
Tags: seo sendawoUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiukusesha okuphilayoukuphendulaukwakheka kwe-ux
UJohn Vuong ungumnikazi kuphela we-Local SEO Search Inc ,. Umsebenzi kaJohn ukusiza abanikazi bamabhizinisi bendawo ukuthi bathuthukise ithonya labo online ukuze bakwazi ukuphatha imboni yabo. Ngobuhlakani bakhe bebhizinisi nokuqonda okungokwemvelo kwendawo yebhizinisi lendawo, uJohn ubhala amabhulogi acubungula ukuthi ungenza kanjani imikhankaso ye-SEO ngokuya ngezidingo zamakhasimende.